မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 387
ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) လုပ်ကြံမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျန်ရစ်သူများက ပြုလုပ် ပြည်တော်ပြန် ကျောင်းသားတပ်မတော် (ဗဟို) ခေါင်းဆောင်ဟောင်း နိုင်အောင်က လေဆိပ်တွင် သူတို့အဖွဲ့တွေက သီးခြားစီဟု သဘောမျိုး ဖြေကြား ရုပ်သံ၊ အာရ်အက်ဖ်အေရုပ်သံသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ (မိုးမခ၏ ဖြည့်စွက်ချက်) မြောက်ပိုင်းလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများကို ရှင်းလင်းခဲ့သူ အေဘီဗဟိုက ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုနိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်သည် ထိုအချိန်က မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ကိုစိုးလင်းကို သူ၏ဌာနချုပ်တွင် ရောက်ရှိနေခိုက် ကိုယ်တိုင်အမိန့်ပေးဖမ်းဆီးပြီး မြန်မာစစ်တပ်၏ ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် နှိပ်စက် စစ်ဆေးရာတွင် တာဝန်ရှိသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မတရား ဖမ်းဆီးနှိက်စက်ခြင်း ခံထားရသော ကိုစိုးလင်း၊ ကိုနေ၀င်းအောင်၊ ကိုထင်ကျော်၊ ကိုမြင့်ဦးတို့ အဖွဲ့သည် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဗဟိုမှ ၁၉၉၅...
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ကျော်နိုင်၊ သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လဆန်း(၁၂)ရက်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၂၉)ရက်နေ့ တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဗေးဧရိယာ ဒေလီစီးတီးမြို့ တွင် ဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်)၏ တရားပွဲကို ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဗေးဧရိယာတွင် အခြေစိုက်သော ထေရ၀ါဓမ္မအသင်းကြီးမှ ကမကထပြု၍ ည(၇း၀၀)နာရီမှ (၁၀း၀၀)နာရီအထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်ပရိတ်သတ်အား အစားအသောက်များဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါသည်။ ဆရာတော်ကြွလာစဉ် ဆရာတော်ဘုရားအား တရားနာပရိတ်သတ်မှ မေတ္တာပို့ သကြပါသည်။ ဆရာတော်မှ ထေရ၀ါဒဓမ္မအသင်းကြီး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကိုးကား၍ သာမဂါမသုတ် တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူပါသည်။ ဆရာတော်မှ တရားဟောကြားပြီးနောက် (၁၅)မိနစ်ခန့်တရားနာပရိတ်သတ်အား တရားထိုင်စေပါသည်။ ထိုနောက် တရားနာပရိတ်သတ်မှ ကောက်ခံရရှိသော...
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၊ လူ ၂၅၀၀ ကျော်ဆန့် ဘင်ဒါအားကစားရုံမှာ မနက် ၉ နာရီ ၁၅ ကန ၁၀ နာရီ ၄၅ အထိ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဧည့်ပရိသတ်များ၊ လုပ်အားပေးများ ဆက်သွယ် စာရင်းပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပြင် အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ ဧည့်သည်များ၊ လုပ်အားပေးများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်အောင် ဘလော့ဂ် ၀က်ဆိုက်တခု လွှင့်တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ http://ASSK-DC.blogspot.com မှာ ဆက်သွယ်ရန် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဖုံးနံပါတ်များအပြင် ဧည့်အမည်စာရင်းသွင်းမှသာ ဖိတ်စာနှင့်တကွ စာတိုက်က ကြိုတင်ပေးပို့ပြီး ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အွန်လိုင်းကနေ မေးခွန်းများ ကြိုတင်ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းကိုပါ...
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရှိသော သတင်းများအရ လက်ရှိအစုိုးရက အမည်မည်းစာရင်းက ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်သော နိုင်ငံခြားသားများစာရင်း ၁၁၄၇ ဦးကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုစာရင်းထဲတွင် ယခင် မဆလတပါတီကာလက ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံ အချို့၊ CRDB အတိုက်အခံအဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် လက်ရှိ ၈၈ အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်း ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံလှုပ်ရှားသူများ အချို့ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယူအက်စ်ကန်ပိန်းဖော်ဘားမားက အောင်ဒင်နှင့် မကြာသေးမီက ပြည်တော်ဝင်မည့် မိုးသီးဇွန်တို့၏ အမည်လည်း ပါဝင်သည်။ အချို့သော အမည်များမှာ ထိုစာရင်းမပယ်ခင်ကတည်း ပြည်တော်ဝင်ပြီးသူ မြန်မာပြည်ဖွားများ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါစာရင်းကို မည်သည့်အချိန်ကတည်းက ထုတ်ပြန်ပြီး အရေးယူထားခဲ့သည်ဟု ပြည်သူသို့ အသိပေးထားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ယခုမှ အမည်စာရင်းက ပယ်ဖျက်သည်ဆိုသည့်အချက်ကို မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသူတို့က မေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။ “အချို့အမည်တွေက ၂...
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၂ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂ Forbes မဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်သည့် အာရှ၏သြဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီး ၁၁ ဦး စာရင်းကို ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှင်နာဝပ်တို့ ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ယခင်တပတ်က No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ သြဂုတ် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ ၁၊ နယူးယောက်မြို့တော်၊ ၀င်းရွှေဝါခန်းမ၊ ၇၃ လမ်း၊ Woodside , NYC. ညနေ ၆ နာရီမှ ၉ နာရီ စက်တင်ဘာ ၂၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ အယ်ဘနီမြို့၊ ဓမ္မ၀ါဒီအောင်မြေမင်္ဂလာကျောင်း၊ ညနေ ၆ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ စက်တင်ဘာ ၈၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ ဇေတ၀န်ကျောင်း၊ နေ့ခင်း ၁ နာရီမှ ၃ နာရီ အထိ စက်တင်ဘာ ၉ ၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ သုခကံသာကျောင်းသစ်တက်ပွဲ၊ နေ့ခင်း ၁ နာရီ ၊ ရွှေည၀ါဆရာတော်နှင့် ဒယ်အိုးဆရာတော်တို့ ၂ပါး၏...
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၁၂ ( ယနေ့ထပ်မံ သိရှိရသော ၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲ ) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်(၂၃/၂၀၁၂) အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအား ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်သည်- (၁) ဦးခင်မောင်မြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၂) ဦးဇော်မင်း လျှပ်စစ်(၁) ၀န်ကြီးဌာန အမိန့်အပြည့်အစုံအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် ထုတ်ပြန်ထားပါကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်(၂၄/၂၀၁၂) ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးလွန်းမောင်အား ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ အမိန့်အပြည့်အစုံအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည် No tags for this post. Related posts No related posts.
တူမောင်ညို၊ သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၁၂ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၉ ဦး “ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေး” တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရုံးခန်းထဲမှာရှိတဲ့ အဆင့်ဆင့်သော အံဆွဲတွေကို ဟိုဆင့်ကနေ ဒီအဆင့်၊ ဒီအဆင့်ကနေ ဟိုအဆင့်၊ အဆင့်နေရာပြောင်းတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မူလကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၂ ဦးသာရှိတဲ့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနဟာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၆ ဦးရှိတဲ့ ဝန်ကြီး ဌာနကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကဘာတွေလဲ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမေးပေးကြပါဦး။ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ “ပြည်ထောင်စုအဆင့်အငြင်းပွားမှုပြဿနာ” နောက်မှာ “ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖောင်းပွမှုပြဿနာ” ပါထပ်တက်လာပါပြီ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနကို စီမံကိုင်တွယ်နိုင်သလို၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးကလည်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနကိုထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်းကျနော်တို့ဝန်ကြီးများရဲ့ပြိုင်စံမပေါ်တဲ့တတ်ပွန်လိမ်မာမှုတွေလို့ပြောရမှလား။ အထွေထွေ ကျွမ်းကျင်သူတွေလို့ပဲဆိုရမှာလား။ နိုင်ငံတကာကို ခေါင်းမော့ဝင့်ကြွားရမယ်အချက်များလား။ “ခရီးမတွင်တဲ့လူတွေ ကျနော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းရှိပါတယ် —...
by Yangon Press International on Monday, 27 August 2012 at 07:18 · သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂၊ YPI နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ယနေ့နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၉) ဦးနှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီး (၁၅) ဦးတာဝန်ပေး ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ရာ ဒုဝန်ကြီး (၁၅) ဦးထဲတွင် အရပ်သား ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန တို့တွင်လည်း ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ပညာရှင်များအား ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ် လိုက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် ဦးသောင်းတင်မှာ ဆက်သွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီး အဖြစ်၎င်း၊ စီးပွားရေးပညာရှင်...
Page 387 of 447«1...385386387388389...447»